Ayax ku habsaday degaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe – Banaadir Times
By banaadir 9th January 2021 87 No comment
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa ayax farabadan uu ku habsaday degaano hoostaga magaalada Jowhar ee Caasimadda dowlad goboleedka Hir-Shabeelle, & degmada Mahadaay, iyada oo ayaxaas uu baabi’iyay dagalyo dhowr ah.
Beeraleyda Gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxaa ay sheegeen in ayaxaan uu dhibaatooyin farabadan u geystay Dalagyo u beernaa, isla markaana lagu arkay inta badan tuulooyinka Magaalada jowhar & degmada Mahadaay.
Waxaa ay sheegeen in Beero badan uu ku habsaday, sidoo kalena ay isku dayeen inay ka hortagaan, hayeeshee ay awoodi waayeen, waxaana ay ugu baaqeen madaxda dowladda & Maamulka Hir-Shabeelle in arrintaas wax laga qabto.
Horay degaano iyo degmooyin ka tirsan koonfurta & Bartamaha dalka Soomaaliya ayaa Ayaxa uu ku habsaday, isaga oo baabi’yay dalagyo dhowr ah halka meelaha qaar laga buufiyay.
Dowlad goboleedyada qaarkood ayaa waxaa ay sheegeen in aysan awoodin wax ka qabashada ayaxan faraha badan leh,waxaan ay ugu baaqeen hay’adaha Caalamiga ah inay gacan ka geystaan sidii wax looga qaban lahaa.